3 ဒီဂရီတိုးလာခြင်းကအိုဇုန်းလွှာကိုခြိမ်းခြောက်လိမ့်မည် ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
ပုံ - Puli-sistem.net
အပူချိန်တိုး။ စဉ်ဆက်မပြတ်မြင့်တက်နေခြင်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ပြcausingနာများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဥပမာ - အရည်ပျော်ခြင်းနှင့်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာခြင်း၊ ပြင်းထန်သောမိုးခေါင်မှု၊ ပိုမိုဆိုးရွားသည့်မုန်တိုင်းများစသည့်ကမ္ဘာကြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သည်။ အိုဇုန်းလွှာ။
၁၅ ကီလိုမီတာမှ ၅၀ ကီလိုမီတာအထိမြင့်သောဤအလွှာသည်ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အခုတော့လေ့လာမှုတစ်ခုကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် ၃ ဒီဂရီပူနွေးမှုသည်၎င်းအားအကြီးအကျယ်ခြိမ်းခြောက်နိုင်သည်.
အိုဇုန်းလွှာပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းအားလျော့ချခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုများ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ဘူး။ အစပိုင်းတွင်အဝေးမှထင်ရလောက်သောဤအရာသည်ယခုထိမဝေးနိုင်ပါ။ အပူချိန်တိုးလာခြင်းသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်ခုလုံးတွင်အမှန်တကယ်ပင်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ပုံမှန်ထက်သူများထက်တန်ဖိုးများထားတဲ့အတွက် 300 ကျော်ဆက်တိုက်လအတွင်းပါပြီ.
လေ့လာမှုအရ Nature Communications ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ မီသိန်းထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းညှိရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်ဥရောပ၌ကြီးမားသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြproblemနာဖြစ်သည်။
ပြင်သစ်တက္ကသိုလ် Institut Pierre Simon Laplace မှ Audrey Fortems-Cheiney အပါအ ၀ င်လေ့လာသူများသည်ဓာတုဗေဒသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမော်ဒယ်ကို အသုံးပြု၍ အပူချိန် ၂ မှ ၃ ဒီဂရီပိုမိုမြင့်မားပါကအပူချိန် ၂ မှ ၃ ဒီဂရီမြင့်တက်လာပါက ကွဲပြားခြားနားသောလျော့ပါးစေသောအချက်များ။
ထို့ကြောင့်သူတို့သည် ၂၀၄၀ မှ ၂၀၆၉ အတွင်းအပူချိန် ၃ ºCနှင့်အတူဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုများကိုလျော့ပါးစေခြင်းမရှိဘဲမြင်ကွင်းတစ်ခုတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အိုဇုနျးပမာဏ 8% ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပါကအိုဇုန်းလွှာထုတ်လွှတ်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့်ရရှိသောလျှော့ချခြင်းကိုကျော်လွန်လိမ့်မည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်အန္တာတိကနှင့် ၁၅ ကီလိုမီတာအကွာတွင်ရှိသောအိုဇုန်းလွှာတွင်းရှိအပေါက်ကိုပိုမိုကြီးမားစေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ခန့်မှန်းချက် » ၃ ဒီဂရီမြင့်တက်ခြင်းသည်အိုဇုန်းလွှာကိုခြိမ်းခြောက်လိမ့်မည်
ငါမှားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ချိတ်ဆက်လေ့လာတာက tropospheric ozone ကိုရည်ညွှန်းသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ဤဆောင်းပါး၏အပိုဒ်တစ်ပိုဒ်တွင် "အိုဇုန်းလွှာပမာဏသည် ၈% တိုးလာပြီး၎င်းသည်အန္တာတိကတိုက်ကိုကျော်။ အပေါက်ဖောက်နိုင်သည်။ " အကယ်၍ အိုဇုန်းလွှာများမြင့်တက်လာပါကအဘယ်ကြောင့်ထိုအပေါက်ကမြင့်တက်နေသနည်း။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်စပိန်နိုင်ငံသို့ 'ရှားပါးသောငှက်' များရောက်ရှိခြင်းကိုပြောင်းလဲစေပါသည်။